हेमन्त भट्टराई – एक सिकारु ब्लगर
एक सिकारु ब्लगर
आफ्नो निन्द्रा बेची सन्तानको सपना किन्ने ‘आमा’
औंशीलाई आमाको मुख हेर्ने विशेष दिनको रुपमा लिईन्छ । हुनत आमाको महिमा, वात्सल्य, प्रेम र सन्तानका लागि गरेको त्यागलाई केही मिठाइ, कपडा, पैसा तथा शुभकामनाको औपचारिकताले मात्र खरिद गर्न सकिँदैन । आमाको जीवनभरको त्याग र बलिदानीको हिसाब बुझाउन आमालाई जीवनभरको खुसी र माया दिनु सार्थक होला । सन्तानको खुसीमा नै आमा सबैभन्दा खुसी हुन्छिन्, सन्तानको प्रगतीमै रमाउँछिन् । आफ्नो निन्द्रा बेचेर बच्चाको सपना खरिद गर्ने आमा संसारमै महान छिन् । आज मानिस भगवान् खोज्न भौंतारिरहेका छन्, कस्तुरीले आफ्नो बीना खोजेजस्तो गरि र आफ्नो समिपमै रहेकी जिउँदो भगवान् आमाको वेवास्ता गरिरहेका छन् ।
बच्चालाई आमा जस्तो भए पनि दुनियाँकै सुन्दर आमा नै लाग्छ, आमाको पसिनाको गन्ध उसलाई बास्नादार लाग्दछ । आमाको काख नै बच्चाको लागि सबैभन्दा सुरक्षित स्थान हो यहाँ यस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति छ कि त्यो संसारको कुनै पनि वस्तुमा हुँदैन । काखमै यस्तो अगाध प्रेम छ कि ऊ काखकै विछ्याउनामा बसी स्तनपान पनि आँखा चिम्लेर गर्दछ । आमालाई एक निमेष पनि नदेख्दा छट्पटिन्छ र आमालाई जति धेरै अरु कसैलाई पनि विश्वास गर्दैन बच्चाले । सबै स्थानमा भगवान्को उपस्थिति संभव नभएको कारण नै सुरक्षाको निम्ति आमाको सृष्टि भएको होला सायद । संसारमा जति पनि सम्बन्धहरु छन् ती सबै सामिप्यता ले बन्न सक्लान तर आमा र आमाको निःस्वार्थ माया संसारको कुनै पनि सम्बन्धबाट पाउन असंभव छ । आमाको प्रेममा कुनै सिमा नै हुँदैन । संसारमा विना शर्त प्रेम गर्ने आमा मात्र हुन् जसले सन्तानका समस्त कमजोरीका साथ पनि स्विकार्छिन । त्यसैले भनिएको छ — ‘कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति’ अर्थात छोरा कुपुत्र हुन सक्छ, माता कहिल्यै कुमाता हुँदिनन् । वास्तवमा आमाको ममता अनमोल र अतुलनीय हुन्छ । रामायणमा पनि भनिएको छ कि ‘जननी जन्मभूमिश्चः स्वर्गादपि गरियसी ।’
अब्राहम लिंकनले भनेका छन् —‘आमा साथमा हुने मानिस कहिल्यै पनि गरिब हुन सक्दैन ।’ यसैगरि विख्यात साहित्यकार जर्ज हबर्ट ले भनेका छन् — ‘विद्यालयका हजार शिक्षक–शिक्षिका भन्दा एक असल आमा मूल्यवान छिन् ।’ आमाको उत्सर्ग र महानतामा आधारित थुप्रै कथा कहानी हरु पनि प्रचलित रहेका छन् । संसारमा यस्ता दार्शनिक महान व्यक्ति छँदै छैनन् जसले आमाको महिमा नगाएको होस् । म्याक्सिम गोर्कीको ‘आमा’, कवि गोपालप्रसाद रिमालको ‘आमाको सपना’, सिद्धिचरण श्रेष्ठको ‘आमा’ यसका केही प्रतिनिधि कृतिहरु हुन् । हरेक सर्जकले आमाको बारेमा साहित्य रचेको पाइन्छ र संसारमा सबैभन्दा धेरै लेखिने साहित्यको विषय नै आमा बनेको छ । राजनीति गर्ने महान् व्यक्तिहरुले पनि आमाको आर्शिवादलाई शिरोधार्य गरेको पाईन्छ । त्यसैले त महात्मा गान्धीले भनेका थिए — ‘मैले जे बोलेको छु त्यो सबै मेरी आमाको देन हो ।’
हरेक प्राणीमा आमा पूजनिय छिन् चाहे त्यो स्वरुपमा सानो नै किन नहोस् । सबै प्राणीले आफ्नो सन्तानको बचाउ गर्दछन् । कुकुरको अगाडी उसको बच्चा छोइदिँदा ऊ झम्टिन जान्छ । पन्छीले पनि आफ्नो बचेराको रक्षाको लागि न्यानो भुवाले छोपेर राखेको हामीले देखेकै छौं । कस्तुरीले पनि आफ्नो बच्चाको हेरविचार र रेखदेख गर्न आफ्नो छातीको थैलीमा राखी बच्चाको सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ । आमा जति पवित्र शब्द यो संसारमा अर्को छँदै छैन । मा, आमा जननी, महातारी, मम्मी, मुमा भनि जुन शव्दले पुकार गरेता पनि त्यो आमा प्रतिको सम्मान नै हो ।
कुनै समय थियो आमाको वचन अकाट्य हुन्थ्यो । त्यसैले त सबै भाइले बाडेर लिनु भनि पाण्डबका आमाले भनेको वचन काट्न नसकि द्रौपतीले पाँच पाण्डबको अर्धाङ्गिनी भएर रहनु परेको थियो । तर अहिले समय बदलिएको छ । अहिलेको मानिस यति व्यस्त भए कि वचन नकाट्नु त परको कुरा बच्चाको भविष्यमा नै आफ्नो भविष्य देखेर आफ्ना सारा सपनालाई तिलाञ्जली दिएका आमालाई दिने समय हुदैन । बच्चामा एउटै कुरा जति पटक सोध्दा समेत हाँसी हाँसी सिकाउने आमाले वृद्ध अबस्थामा एक पटक मात्र सोध्दा पनि झर्किने तथा वेवास्ता गर्ने सन्तानको कमी छैन यहाँ । जब साहाराको आवश्यकता पर्छ तब सन्तानले अनकन्टार बेसाहारा वृद्ध आश्रममा छोडिदिन्छन् र आफ्नो अन्तिम श्वासको पर्खाइमा पट्यारलाग्दो जीवन गुजार्र्न बाध्य छन् । शिक्षाका लिने र आधुनिकताको नाममा शहर पसेका सन्तानले आमा तथा घर परिवारलाई वेवास्ता गरि शहरमा नै घरजम गरि आमालाई वेवास्ता गरेका छन् । आमालाई पन्छाएर जीन्दगी बाँच्न खोज्ने सन्तानको सफलता टुुहुरो हुन्छ । आफ्नो सुखलाई तिलान्जली दिएर सन्तानको सुखमा रमाउन सक्ने तागत आमा बाहेक अरु कसैमा पाउन सकिँदैन । त्यसैले त अन्तिम श्वास सम्म पनि सन्तानको सुखको कामना गरिरहेकै हुन्छिन् आमा ।
जब कुनै पनि वस्तु आफू भन्दा टाढा हुन्छ तब त्यसको महत्व थाहा हुन्छ । अहिले आमा नहुने हरुलाई जति आमाको महत्व महसुस भएको छ त्यति महत्व आमा नहुने हरुलाई थाहा नहुन सक्छ । पिंडादायी प्रसव वेदना सहेर, जति सताउँदा पनि माया र ममताले ठूलो मान्छे. बनाएको आफ्नो सन्तानले वेवास्ता गर्दा कुन चाहिँ आमाको मन नभक्कानिएला र ? आमाको खुसीमा खुसी हुने र दुःखमा साथ दिने गरेमा मात्र पनि आमालाई ठूलो खुसी मिल्न सक्छ । त्यसकारण आमाको मायालाई समय छँदै चिनौं, जव आमा आफूबाट टाढा पुगिसकेपछि मात्र आमाको नाममा आँशु खसालेर मात्र आमा प्रतिको कर्तव्य पूरा हुन सक्दैन । जिउँदो छँदै आमाको पूजा गरौँ आमालाई तृप्त बनाउँ । बाँचुन्जेल आमालाई वेवास्ता गरि मृत्यु पछि आमाको प्रतिविम्ब खोज्नु मुर्खता शिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।
Author मेरो बकपत्रPosted on April 29, 2014 Leaveacomment
कर्नालीको सपना तुहिएको कथा (पुस्तक समिक्षा)
गीत तथा अखबारी लेखनमा स्थापित सुरेश प्राञ्जलीको नाम आजभोलि चर्चामा छ । कारण, उनले लेखेको उपन्यास ‘तुइन’ जसले आज फेरि दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र गरिबीको चेपुवामा परेको कर्नालीको चीत्कार सुनाएको छ । कर्नालीवासीले भोगेको उत्पीडनको कथालाई यसले उजागर गरेको छ, जहाँ कर्णालीवासीहरु मर्दै जिउन विवश छन् ।
दुर्गम कर्णालीको एउटा ठिटाको आँशुले लेखेको सपना हो ‘तुइन’, जसको मृगतृष्णा कहिल्यै पूरा हुन सकेन । जुम्लाको गरिब परिवारमा जन्मेको भूमिराजले द्वन्द्वकालको दुई पक्षबीचको चेपुवामा परेको पात्रको प्रतिनिधित्व गरेको छ । भौगोलिक विकटता भएको कर्णालीमा विकासको छायासमेत पर्न सकेको छैन । द्वन्दको चेपुवामा परेका कर्णालीवासीलाई प्रकृतिले पनि नराम्ररी ठगेको छ । यहाँका नागरिकको सपना द्वन्द्वकालका दुई पक्षीय सेनाको बन्दुकको कुन्दाले थिचिएका छन् । भर्खर प्रेमिल संसारमा भुल्न खोजेको कान्छा (भूमिराज) को प्रेम मालतीलाई पनि यही द्वन्द्वको झिल्काले चुँडिदिएको छ । हाँस्ने, खेल्ने, रमाइलो गर्ने बाल्यकाल खोसिदिएको छ । आफ्नो पढाइ तथा भविष्य त्यागेर द्वन्द्वमा होमिनु यहाँको नियति नै बनेको छ । भूमिराजले पनि यही नियतिलाई निरन्तरता दिनु बाध्यता बनेको छ । आफ्नै आँखाको अगाडि मृत्यु देखेको छ भने आफ्नै साथीको अन्तिम चीत्कार पनि सुनेको छ ।
यही युद्धको समयमा आमालाई झाडापखाला भएको बेला पानी खुवाउन हुँदैन भन्ने कुरा पढेको थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका मानिसहरुको अन्धविश्वास तथा कुसंस्कारको जित हुन्छ र भूमिराजको हार अनि आमा कर्णालीमा समाहित भएको कारूणिक कथा छ ‘तुइन’मा । भोकमरी, महामरी, कुसंस्कार, अन्धविश्वास र अशिक्षाका कारण कयौँ भूमिराज र उसका परिवारजनहरु दुःखको भूमरीमा पर्नु परेको छ, टुहुरो हुनु परेको छ । यसर्थमा पनि यस क्षेत्रको युद्धको समय अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक छ ।
डर र त्रासका बीचमा आमाको जस्तो माया गर्ने भाउजूलाई एक्लै घरमा छोडेर, आफ्नो प्यारो जन्मभूमि छोडेर जाने निर्णय गर्छ वा नियतिले छोड्न बाध्य बनाउँछ । जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत हुँदै नियतिले उसलाई पछार्दै ल्याउँछ । उसलाई पोखरा जाने रहर लाग्छ र पोखरा जाने क्रममा नवलपरासीमै ऊ अलपत्र हुन्छ र एउटा घरको शरणमा ऊ पुग्छ । त्यहीँ उसले पढ्छ, एसएलसी पास गर्छ र उच्च शिक्षा पढ्न पोखरा जाने क्रममा फेरि सेनाको जबरजस्तीले उसलाई जेलमा लग्छ । नभएको कुरा हो भन्न निर्मम यातना दिन्छ र त्यहीँ उसको सारा सपनाको अन्त्य हुन्छ । सत्यको हार हुन्छ । माओबादी छापामारबाट स्वतन्त्रताको खोजीमा हिँडेको भूमिराज अन्त्यमा त्यही भुमरीमा जाकिन्छ । यो नै तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको चेपुवामा परेका नागरिकको प्रतिनिधि घटना हो ।
सरकारले पनि कर्णालीका बासिन्दालाई सौतेनी व्यवहार गर्दछ । कुहिएको तथा म्याद सकिएको चामलमा फोहोरी राजनीति हुन्छ । चामलमा भनसुन हुन्छ, कर्मचारीसँग आफ्नो नजिकको पहुँच हुनुपर्छ चामल पाउँन । यहाँ सरकारी तोक चाहिन्छ, केही केजी चामल पाउँन । यहाँ उनीहरुलाई न्याय कसले दिने, उनीहरुको कुरा कसले सुनिदिने ? दुई दिन हिँडेर चाडपर्वमा चामल लिन गएको र नपाएर फर्किंदा उसको सरकारप्रति धारणा कस्तो होला ? हामी सबै अड्कल लगाउन सक्छौँ । यति मात्र नभएर कर्णाली नदीमाथिको खिया लागेको जीर्ण तुइन काल बनेर रहेको छ, कति बेला निल्छ थाहा छैन । बाबुछोरा चामल लिन जाँदा त्यही तुइन चुँडिएर बाबुुको मृत्यु हन्छ र छोरा एक्लै घर कसरी फिर्ता भयो होला, यो नै ‘तुइन’ले बोकेको वास्तविक दुःख हो । खिया लागेको तुइन जस्तै छ समग्र कर्णालीवासीको जीवन, कति बेला चुँडिन्छ थाहा छैन । यो कर्णालीको व्यङ्ग्य पनि हो, सरकारका लागि ।
कर्णालीले पानी धेरै बगाउँछ, तर कर्णालीवासीको दुःख बगाउन सक्दैन । जीर्ण तुइनमा कर्णालीको जीवन अडेको छ । दुःखमा रूमल्लिएको कर्णालीको समृद्धि र विकासको सपना देख्नु पनि अपराध छ, यहाँ त्यो समयमा । सरकारको नजरसम्म पनि कर्णालीमा पुग्दैन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यहाँको दुःख वर्णन सुन्दा सबैको आँखा रसाउँछन् भने बाल्यकालका केही चकचक उटपट्याङले आफ्नो बाल्यकालको सम्झनामा पु¥याउँछ । लेखकले कर्णालीको दुःखको आत्मालाई समाएका छन्, जो कसैलाई पनि यो पढ्दा सहानुभूति लाग्न सक्छ ।
लेखकले ‘तुइन’मा प्रयोग गरेको भाषा, लेखनशैली तथा छोटा वाक्यले पाठकलाई अन्तिम पृष्ठसम्म तान्न सक्छ । अझ भनौँ, भाषिक सशक्तताको लागि पनि यो पुस्तक पढिने अनुमान गर्न सकिन्छ । लेखक कर्णालीभन्दा बाहिरको क्षेत्रको भएता पनि त्यहाँको भाषालाई दुरूस्त पार्न सक्नु उनको खुबी हो । तर, कर्णालीभन्दा बाहिरको पाठकलाई भने यसको भाषाले पढ्नमा केही असहज भने बनाउने छ । किताबको कभर तथा पुस्तकको आकारले पनि सबैलाई अकर्षित गर्न सक्छ । यो पुस्तक पढ्दा पटक्कै पनि झिँजो लाग्दैन, यसको विषयवस्तुले यसरी समाउँछ कि अद्योपान्त नपढी छोड्न मन लाग्दैन । यसको मूल पात्रको उडान र हन्डर–ठक्कर पाठकले पनि सँगसँगै खान्छन् ।
पुस्तक छोटो लाग्छ, अझै लामो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पाठकलाई लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । यसको अन्त्य एउटा धारावाहिक चलचित्रजस्तो गरी भएको छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा पाठकलाई नै आफूअनुकूल सोच्ने जिम्मा दिएका छन्, लेखकले । यसको कारण पाठकलाई केही खल्लो पनि लाग्न सक्छ । यसको अन्त्य सुखमय होस् भन्ने पाठकको चाहनाको विपरीत देखिन्छन्, लेखक । समग्रमा सबैको उपेक्षा रहने गरेको नेपालको भूगोलको यथार्थ चित्रणमा भने यो उपन्यास निकै सफल देखिन्छ ।
(यो समिक्षा चितवन पोष्ट मा प्रकाशित भएको थियो)
Author मेरो बकपत्रPosted on April 28, 2014 Leaveacomment
संविधान बनाउन कि मन्त्री हुन निर्वाचन ?
– हेमन्त भट्टराई
संविधान बनाउनै भनेर दुनियाँमा कतै नहुने दोस्रो संविधान सभाको चुनाव नेपालमा भयो । सबैको आशा थियो अब त नेताहरुको चेत खुल्नेछ र विगतका गल्ती कमजोरी नदोहो¥याई तोकिएको समयमा संविधान बन्नेछ भन्नेमा । तर त्यही पक्षले यसलाई नारामा मात्र सिमित राख्यो । अहिले आएर प्रस्ट भयो कि संविधान को नाम भजाएर यी नेताहरु पदमा आसिन हुन चाहान्छन् र फेरी पनि देशलाई प्रयोगशाला बनाउन खोज्दैछन् । चुनाब त केवल आफूले चाहेको पदमा पुग्ने भ¥याङ भएको छ । संविधान बनाउँछु भन्दै जनताको भोट गुथेका नेताहरु अहिले पदको लागि नै हुँकार गरिरहेका छन् । के जनाताले दिएको जनादेश यहि थियो ? के संविधान बनाउन र जनताको जीवनमा परिवर्तन दिलाउन सबैलाई गृह, परराष्ट्र, अर्थ, स्थानिय विकास, भौतिक योजना जस्ता मन्त्रालय नै चाहिने हो ? यदि यी नेताहरुले साँच्चै जनताको हित नै सोचेका थिए भने गरिबी तथा सहकारी, कृषि, शिक्षा जस्ता जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार तथा सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय किन प्राथमिकतामा परेनन् ? किन सबलाई मालदार र पावरवाला मन्त्रालय चाहिएको छ । कोहि पनि कसैको अगाडी कमजोर देखिन चाहाँदैनन् । चुनाबको बेलाको प्रतिवद्धता कसैले दोहो¥याउन चाहँदैनन् र कसैको प्राथमिकतामा पनि देखिँदैन । यस्तो अबस्थामा देश कसरी बन्छ र संविधान निर्माणको प्रकृया कसरी पूरा हुन्छ ? नेपाली जनताले कहिले सम्म आर्थिक विकास र आर्थिक समृद्धिले फड्को मारेको सपनामात्र देखिरहने ? कहिले सम्म देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने ?
Author मेरो बकपत्रPosted on February 15, 2014 1 Comment
बच्चा को रमाइलो पढाई
Author मेरो बकपत्रVideoPosted on February 11, 2014 Leaveacomment
पशुपतिनाथ सम्झदा जोगमेहर आँखामा : सम्झना नारायण गोपाल को
सम्झना पातलिए हुन्थ्यो झै लाग्दा झन् बाक्लिएर आउँछ । बिर्सन खोज्दा झन् झन् सम्झन्छु । अनि दुख्छु टोलाउँछु र एकान्तमै हराउँछु । नारायण गोपाल खस्दा पचास र गोपाल योन्जन खस्दा सय प्रतिसत नै बिमुख भएँ म । यो पट्यारलाग्दो युगमा नितान्त एक्लो र असान्दर्भिक नै भएको छु ।
गाढी चढेर हिड्दा एफएम लगाउँछु त्यो पनि चाख दिएर सुन्न सक्दिन् । गीत लेख्नै छाडेँ । दिनभर घरमै कवितामा रुमल्लिन्छु बरालिन्छु बिलाउँछु । साँच्चीकै एक्लोपनको महसुस भएको छ ।
सन् १९६४ को कुरो । नेपाली कला संगीतको उर्लदो बाढी थियो दार्जलिङमा । बैरागी काई,ला ईश्वर बल्लभ, अमर गुरुङ, अगमिसंङ गिरी, गोपाल योञ्जन, कर्म योञ्जन जस्ता व्यक्तित्वहरुको चहलपहल थियो त्यहाँ । स्नातकको पढाइका क्रममा म त्यतै थिएँ ।
नेपाली लोकगीत र नाचलाई धेरै वर्ष अगि देखि प्राथमिकता दिने हिमालयन कला मन्दिर निक्कै चर्चामा थियो । समय मिलाएर धेरै पटक त्यहाँ पुग्थेँ । बेला बेला भैरहने कवि गोष्ठीहरुमा पनि झुल्किन्थेँ । गोपाल योञ्जनसँग मेरो दोस्ती गहिरो थियो त्यसबेला । कला मन्दिरमा हामी ग्रामोफोनबाट गीतहरु सुन्थ्यौं । रेडियो नेपाल पनि धेरै सुन्ने बानी थियो । नारायणका गीत सुनेपछि म र गोपाल उनको स्वरको तारिफ गथ्यौं ।
नारायण त्यसबेला भारतको इन्दरेको बारुदा भन्ने ठाउँमा संगीत पढ्दै थिए । स्नातक सकेकी पेमला लामा भने दार्जलिङकै एक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदैथिइन् । देखभेट नभएका उनीहरु बीच चिठी पत्र आदान प्रदान हुन्थ्यो । नारायण पहिलो पटक पेमलालाई भेट्न दार्जलिङ आए । इश्वर बल्लभकै कारणले मेरो नारायण गोपाल र गोपाल योञ्जनको चिनजान भयो । उहाँ ५\_७ दिन दार्जलिङ बस्नु भयो ।
मैले पहिला भेटमा उनलाई एकदमै रसिक पाएँ । आफ्नो विषय प्रति निक्कै नै गम्भिर । हामी बीचका सम्बन्धहरु औंपचारिकताबाट अनौपचारिकतामा जाँदै थियो । त्यो बसाइमा हामीसँगै उनको घुमघाम र उठबस भए । गोरखा दुःख निवारण समितिको हलमा पुगेर उनी गाउँथे । “स्वर्गकी रानी मायाकी खानी…” धेरै जसो रत्न समसेरका यस्तै गीतहरु सुन्न पाइन्थ्यो । ती भेटहरु अविस्मरणीय रहे ।
म धेरै जसो कवितामा हराउथेँ । प्रमाणपत्र तहमै मैले कविताको पुस्तक निकालेको थिएँ । गोपालको करले मैले केही गीत लेखेँ । गोपालले त्यसमा संगीत भरे । उनलाई मात्र हैन म आफैलाई पनि निक्कै मन पर्यो ।
म फर्केको केही महिना मै नारायण फेरि दार्जलिङ आए । उनका ८ गीतहरु रेडियो नेपालमा रेकर्ड हुने भएछन् ।
हामीले लेखेका २० /२५ गीत उनलाई सुनायौं । उनले त्यसैबाट आठ गीत छाने र रेकर्डको लागि कलकत्ता पुगे । ती मध्ये मेरा पनि ३ गीत परे ।
तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि…
त्यही बेलाका गीत थिए यी । २०/२२ वर्षे लक्का केटो म । आफ्ना गीत रेडियोबाट सुन्दा । त्यसका उत्साहपूर्ण प्रतिकि्रया पाउँदा निक्कै पुलंकित हुन्थेँ । हाम्रो दोस्ती निक्कै गाढा हुँदै थियो ।
नारायण र पेमलाको पहिलो भेटको कुरो । त्यसअगि उनीहरु बीच पत्र आदान प्रदान मात्र हुन्थ्यो । पेमलालाई भेट्न नारायण गोपाल दार्जलिङ आउँदाको कुरो । म कर्म गोपाल र नारायण गाडीमा उनले पढाउने स्कुल खोज्दै गयौं । नारायण र कर्म गाडीमै थिए ।
म र गोपाल योञ्जन सरासर स्कुलको गेटमा पुग्यौं । उहाँलाई बोलाइदिन चिट बुझाएपछि उहाँ सरासर बाहिर आउनु भयो । म गोपालको दायु तिर थिएँ ।
“मित ज्यू भेट्न आउनु भएको छ,” गोपालले दायाँ तिरै हात तेसा्रउँदै भने । उहाँले गाडीमा रहेका नारायाण गोपाल तिर देखाउन खोजेपनि हात भने दायाँ पट्टी बसेको मै तिर सोझियो ।
पहिल्य कहिल्यै नदेखेको मान्छे । उहाँले त म नै नारायण भन्नु भएछ क्यारे रातो पिरो अनुहार लगाएर तल मुन्टे झुकाउनु भयो । मलाई पो लाज भो । मैले हत्तन पत्त नारायण गोपाल त गाडी नेर हुनुहुन्छ भनेर मुख खोलिहालेँ ।
भारताको पढाइ सकेर उनी नेपाल आए । हामी पशुपति घुम्न जान्थ्यौं । त्यहाँ एक बाबा थिए चित परिचित । नारायणलाई देखेपछी उनी चिलममा गाँजा भर्थे । “ए नारायण गोपाल इदर आवो”, आफूले एक दुई सर्को तानेर उनी नारायण तिर तेर्साउँथे । नारायाण पनि के कम “स्वार्र स्वार्र पार्थे ।” तर पनि कन्ट्रोलमा बस्थे । उनी रक्सी चुरोट सुर्ती जे पनि खाने । तर बेहोस हुने गरि खान्छ भन्ने कुरा चाहीँ बढाइचढाइ हो ।
भूगोल पार्कको इन्दिरा रेष्टुरेन्ट हाम्रो जमघटको थलो थियो । त्यस्तै धर्मपथको पारस होटलका ११ हो की १३ नम्बरको कोठा भूपी शेरचनको नाममा पहिल्यै बुक हुन्थ्यो । त्यो कवि साहित्यकारको जमघटको थलो थियो । खाएपिएको सप्पै भूपीले तिर्ने । के गर्नु त्यती बेला अरुसँग तिर्ने पैसा कमै हुने । जमघटमा निक्कै रमाइलो हुन्थ्यो । भूपीसँग नारायणको दोस्ती यस्तो बढेको थियो कि उ सकेसम्म कुनै कुरा टार्दैन्थ्यो । भूपी सानो बाबु भनेर बोलाउँथे नारायणलाई । टोलटोलमा हुने भजनमा नारायण हान्निएर पुग्थे । डुबेर गाउँथे । उसको गायन कला देखेर सबै हेरेको हेर्यै हुन्थे ।
सब्बै उसलाई घमण्डी भन्छन् । अभिमानी भन्छन् । मलाई त उ स्वाभिमानी लाग्छ । “नमस्कार गर्दा पनि फर्काउँदैन्थ्यो”, यसै भन्छन् कोही । तर मैले बुझेको उ मनको त्यस्तो थिएन् । मलाई उसको आँखा निक्कै कमजोर भएको शंका थियो । उ अभिभादन फर्काउँदैन्थ्यो किनकी उसले राम्ररी देख्न पाएको हुन्थेन । मैले आँखा जँचाउ भन्दा पनि उसले “काँ सोम देख्छु भन्दै टार्थ्यो । एक दिन उ डाक्टरकहाँ पुग्यो । पछि बल्ल थाहा पायो कि उसको आँखाको पावर झण्डै माइनस ७ थियो ।
उनी काल्पनीक कुरा गर्न निक्कै रुचाउँथे । श्रीमतीलाई कहिल्यै उदाष हुन दिएनन् । निक्कै ठट्टा गर्नु पर्ने । उदाष माहोललाई रोमान्चक बनाउन उनी झिंगाको पनि क्यारिकेचर गर्थे र हँसाउँथे ।
पैसामा उनीलाई नोठ मन पदैन्थ्यो । सिक्का त्यो पनि सानो पैसाको उनलाई यस्तै मन पथ्र्यो । “दश लाखको सिक्का साटेर पसिना आउन्जेल गन्दै बस्न कस्तो हुन्थ्यो होला”, घरि घरि उनी यस्तै अचम्मका प्रश्न तेर्साउँथे । खुब हसाउँने । उनका कुरामा निक्कै रस हुन्थ्यो, हँसाउन र ट्रर्याक चेन्ज गर्ने ।
हामी हिड्दै गफ गर्दा उनी भन्थे “ह्या थापाकाजी कति हिड्नु कहिलेकाहिँ त आकाशमा उड्न पाएनी हुन्थ्यो नी । बाटोमा झै आकाशमा पनि साथीहरु उडिरहेका भेटिउन् । ए काँ गएर आएको अमेरिका म भर्खर जापान पुगेर आएको । अब जर्मन जाँदै हैत”, यसै भन्दै उड्ने कुरा गर्थे उनी ।
२५/२६ साल तिरको कुरो । मेरो गीत बजारमा आएको थियो । मेरो गीत
“म उभिएको धुलोले सुनोस् महलले सुन्दैन भने झुपडीले सुनोस्…” यस्तै बोलको गीत माथि रेडियो नेपालको तत्कालिन महानिर्देशक भोग्य प्रसाद शाहासँग मेरो झगडै भयो । महल झुपडी जस्ता शब्द भएकाले उनले पछिल्लो लाइन गीतबाट हटाउन अनुरोध गरे । मैले मानिन् । चक्का नै लिएर त्यहाँबाट हिडेँ । “मलाई मन परेको गित हो सोम एक लाइन चेन्ज गर्देउन त” नारायणले अनुरोध गरेपछि मात्र मैले माने । निक्कै मिल्ति थियो हाम्रो ।
सायद सन् १९७० ताका होला । मलाई ठ्याक्क ख्याल भएन । महेन्द्र पुलिस क्लबमा “मित्ज्यु नाइट” को आयोजना गर्यौं । गोपालको संगीतमा नारायणको स्वर । हल नै गुंजायमान भएको थियो । त्यसको दुई महिना जति पछि होला । एकाबिहानै नारायण सुटकेश बोकेर मेरो कोठमा आइपुगे ।”हेरन सोम बिबाह गर्न दार्जलिङ जान लाग्या त्यत्ती खर्च बोक्या छैन् के गर्ने होला” उनले भने ।”मित्ज्यु नाइट” मा उठेको पैसा थियो मसँग । त्यसको केही भाग पहिल्यै उनले कलकत्ता पुगेर हार्मोनियम र अन्य बाद सामाग्री खरिदेको थियो । उसैको पैसा हो । मैले २४ हजार उनको हातमा हालिदिएँ ।
नारायणको बिबाह पछि उनी पेमला सहित काठमाडौं फर्के । नारायणका बाबा कुशल सितारबादक थिए । उनी क्लासिकल नारायण सुगम संगीत तर्फ । “ए थापाकाज लौन त्यसलाई सम्झाइदेउ स्राष्ट्रीयसंगीत तिर लाग्ने भन्देउ” बा आशा गोपाल यसै भन्थे मलाई । नारायण के मान्थे । कुरामा मिल्ती नभएर उनी पेमला सहित पोखरा गएर बसे । केही वर्ष पछि काठमाडौं फर्केका उनलाई एक दिन ठूलो समस्या पर्यो । डाक्टरले दिएको मिति अगि नै पेमलालाई सुत्केरी बेथा लाग्यो । अस्पताल लाँदा थाहा भयो उनको पाठेघरमा नभइ ट्युबमा बच्चा बसेको रहेछ । डाक्टर दिनेश नाथ गंगोल लागि परे पेमलाको अप्रेसनमा । अप्रेसनबाट ठिक त भइन् तर कहिल्यै सन्तान पाउन नसक्ने भइन उनी ।
नारायणले यसबारे कहिल्यै गुनासो गरेनन् । उनको गुनासो हुन्थ्यो त केबल गीतसंगीतको क्षेत्रका बारे हुन्थ्यो । “बाद्यबादन राम्रो बनाउन सकिएन भने नेपाली संगीतले राम्रो फड्को मार्न सक्दैन्” उनी यसै भन्थे । भायोलिन प्रखर रुपमा बजाउने मान्छे नभएकोमा पनि उनको गुनासो थियो । अर्को गुनासो नेपाली संगीत क्षेत्रमा सम्बन्धीत पत्रीका भएन भन्ने थियो । बाजा गीत र नाचलाई मिलाएर बागिना नामको त्रैमासिक पत्रिका पनि सुरु गर् यौं । मुस्कीलले केही अंक मात्र निस्कन सके । पत्रिकाका लागि लेख रचना पाउन पनि मुस्कील । अरुको नाममा म आफैले पनि धेरै लेख लेखेको छु पत्रिका भर्नकै लागि । उनी लौंन सोम नेपाली संगीतमा केही गरौं भन्थे । उनको प्रेरणामा मैले पनि केही समय संगीतका पुस्तक ल्याएर पढेँ पनि ।
नारायण खानमा निक्कै सौंखिन मान्छे । पकाउन पनि उत्तिकै माहिर । गज्जब बनाउने । खसीको मासु त औंधी मिठो बनाउने । उनको हातबाट बनेको मेथिको अचार निक्कै स्वादिलो हुन्थ्यो । मेरी श्रीमती मंजु पनि खुसा्रनीको अचार बनाउन माहिर । यता बनाएको छ भने उता लैजाने र उता बनाउँदा यता ल्याउने चलन थियो ।
नारायण महाराजगंज घर बस्दाको कुरो । उहाँलाई मासु कम खान डाक्टरले सल्लाह दिएका थिए । काम गर्ने केटोलाइ मासु किन्न पठाउँदा पेमिलाले एक पाउ मात्र ल्याउँ भनिछन् । यो कुराले दिक्क परेका नारायणले श्रीमतीलाई भने “हैन तिमीलाई लाज लाग्दैन् खाने तिन तिन जना । त्यसमाथि नारायण गोपालको घरबाट एक पाउ मासु किन्न पठाउँछन् भन्दा त्यो पसलेले के भन्ला?” उहाँको यस्तो जिद्दीलाई पेमिलाले टार्न सक्दैन्थिन् । “ल त्यसो भए आधा किलो ल्याउँ” पेमिलाले त्यती भनेपछि भने केटोसरासर जान्थ्यो । पेमिलाले सबै मासु पकाए पनि आधा भने छुट्टाएर साँझका लागि राख्थिन् । सबैले खान खाएपछि उनी अफिस जान्थिन् । यही मौंकामा नारायण लपालप बाँकी मासु खाइदिन्थे । खान भनेपछि उनी निक्कै सौंखिन थिए ।
उनी खस्नु भन्दा डेढ वर्ष अगाडीको कुरा । त्यतीबेला म कृष्णभक्त उपेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका साथीहरु न्युरोड पिपलबोटलाई जम्मा भएर गफिने थलो बनाइसकेका थियौं । एक दिन मोटरसाइकल लिएर नारायण राजधानीको न्युरोड आए । बाइक त्यही आडामा राखे । “ए सोम म आइहालेँ है” यती भनेर उनी कता हिड्थे हिड्थे । आधा घण्टामा झुल्कन्थे “सोम म गए है” बाइक स्टार्ट गर्यो हिड्यो ।
यस्तो दिनचर्या ४/५ दिन दोहोरिएपछि भने मलाई अचम्म लाग्यो । एक दिन उनलाई लुकीलुकी पच्छ्याएँ । उनी त कृष्ण गुतपाक भण्डार पुगेर पैसा निकाल्न थाले “एकपाउँ दिनुस् त ।”
एक पाउँ गुतपाक बोकेर उनी सरासर मांकालको मन्दिर पछाडी गए । त्यही छेलिएर उनी त कपाकप गुतपाक खान थाले । सुगरको बिरामी त्यसमाथि गुतपाक । मैले उनलाई पक्रे र सम्झाएँ । यस्तै थिए उनी खान भनेपछि केही नबार्ने मनले माग्यो की खाइहाल्यो ।
उनले सोचे पछि सोचे सोचे । अन्तिम अवस्था हुँदा पनि बिरअस्पतालको कुरो । उनले धेरै चिकेन सजेज माग्न थालेपछि डाक्टरले एक टुक्रा भन्दा नदिनु भनेका थिए । उनी भने थप दुई टुक्रा नपाए खाँदै खान्न भनेर जिद्दी गर्न थाले । हामीले त्यो नपुर्याइ सुख पाएनौं ।
त्यसबेला म र मेरि श्रीमती उनलाई कुर्न पालैपालो बस्थ्यौं । नारायणले एक दिन भने “सोम निन्द्रै परेन यार सुत्नै सक्दिन् ।” यति भनेपछि मैले सुत्ने बेला आँखा चिम्म गरेर पशुपति नाथलाई सम्झनु निन्द्रा लाग्छ भनेँ । उनी के भन्छन् “काँ मैले हिजो त्यस्तै गर्न त खोज्या हो नी पशुपति सम्झदा जोगमेहर श्रेष्ठ पो आँखामा झलझली आउँछन् काँ सुत्न पाउनु ।” उनी अन्तिम अवस्था सम्म पनि यस्तै रसिक कुरा गर्थे ।
अस्पतालमा छँदा उनले नै आफ्नो घरलाई एउटा ट्रस्ट बनाएर राख्न भनेका थिए । त्यसको आडमा गीतगंगा भन्ने एउटा सानो अडिटरीयम बनाउन उनको अनुरोध थियो । उनी बिर अस्पताल भर्ना हुनु अगावै उनलाई भारत लगेर मृगौंला फेर्ने कुरा थियो । त्यसको चाँजो पाँजो बसन्त चौधरीले मिलाइ सकेका थिए । त्यही चौधरी जसको सक्रियतामा क्यान्सर पिडित सोसाइटीका लागि नारायण गोपाल साँझ आयोजना गरिएको थियो । भारत जान टिकट पनि रेडि भैसकेको थियो । अफ्सोच उनी अकस्मात हर्ट अट्याक भएर बिर अस्पताल पुगे ।
उनी अस्पतालमा छँदा धेरै नेताहरु भेट्न आउँथे । कृष्ण प्रसाद भट्टराइ पनि आइरहन्थे । हरेक दिन रेडियो नेपालको प्रमुख समाचारमा फलानो नेता नारायणलाई भेट्न गए भन्ने आउँथ्यो । यो समाचारले अपरिचितमाझ पनि उनलाई परिचय गराउने बाटो बन्यो ।
दिनहुँ आउने एक जना वरिष्ठ नेता थिए गणेशमान । उनी यति चाँडो जान्छन् भन्ने थाहा भएन । गणेशमानले उनलाई तत्कालिन नेपाल राजकिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । “मेरो इच्छा बमोजिम काम गर्न पाउने भए मात्र बस्छु” नारायणले यस्तै भने । गणेशमानले सल्लाह गरौंला भनेर गए । पछि नारायणलाई झन् झन् च्याप्यो । उनी शारिरीक रुपमा यो संसारबाट हराए । यो कुरा पनि हराएर गयो ।
२०२७ सालमा धूपी भन्ने साहित्यीक पत्रीका आउथ्यो । त्यसमा मैले लेखेको आर्टिकलमै उनलाई धेरै पटक स्वर सम्राट नामले बोलाएको छु । तर कोही व्यक्ती संस्था वा सरकारले स्वर सम्राट पदवी उनलाई भिराएको म मान्दिन् । उनलाई स्वर सम्राट बनाउने नेपाली जनता हुन् संगीतका पारखीहरु जसले उनलाई सधैं माया गरे ।
उनको अन्त्यष्टीमा त्यस्तो हुलका हुल मान्छे विपि कोइरालाको सव यात्रा बाहेक कहिल्यै देखिएको थिइन । मान्छेको भिड थेगिसक्नु थिएन् । घर घरका छतमा झ्याल र कौशीमा मान्छे झुण्डीएका थिए । उनी जस्तो गायक न कहिल्यै जन्मेको छ न जन्मने छ ।
Author मेरो बकपत्रPosted on December 4, 2013 Leaveacomment
सुर्खेतको बुलबुले ताल
लाटीकोइली गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ मा एउटा बुलबुले ताल रहेको छ । सुर्खेत उपत्यकाको सवैभन्दा ठूलो पानिको श्रोतको रुपमा रहेको बुलबुले वि.स. २०२९ साल पहिले तिलपुर, कुन्टी, नयाँगाउँ, पातालगंगा जग्गा सिचाईको निमित्त ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो । यद्यपि सिंचाईको निमित्त पहिले पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर पनि आजकाल सिंचाईभन्दा यसको बुलबुल गर्दै जमिन मुनीबाट निस्कने पानीको फोका र बाह्रै महिना एकनासले सम्पूर्ण धाराबाट बग्ने अविरल पानीको बढी महत्व छ । बुलबुलेको आजकाल देखिने जलकूण्ड निर्माण गरिनुपूर्व सानो चिरोमा केही ठुला ठुला ढुङ्गाको बिचबाट पानी बुलबुल गर्दै बाहिर निस्केर बग्ने गर्दथ्यो । यहाँ स्थानीयबासीले लुगा धुने, स्नान गर्ने र खानेपानीको समेत प्रयोग गर्ने भएकाले मुखिया भीमराज पोख्रेलले बुलबुले पानीको मुहानदेखि पश्चिमपट्टि बरपिपलको रुख रोपेर चौतारी समेत बनाईदिएका थिए ।
वि.स.२०२९ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सुर्खेत गएपश्चात वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थीत शहरको रुप दिने आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न वीरेन्द्रनगर नगरयोजना कार्यान्वयन समितिको गठनभै नगर योजना कार्यान्वयन ऐन लागु गरिएको थियो । यो वर्तमान बुलबुले ताल वीरेन्द्रनगरभित्र नपर्ने भएपनि पानीको राम्रो स्रोत भएकाले यसको संरक्षण गरिनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर इन्जिनियर माधवभक्त माथेमाले योजनाभित्र समावेश गरे । सुर्खेत उपत्यकाभित्र रहेका महत्वपूर्ण दार्शनिक र पुरातात्विक स्थानहरुको संरक्षण गर्ने क्रममा वीरेन्द्रनगर नगर योजना कार्यान्वयन समितिको सक्रियतामा महत्वहिन जस्तै वन्न पुगेको वुलवुले तालको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्यको थालनी भयो । यस तालको पूर्व तिर महिलाको लागी ५ वटा र दक्षिण तिर पुरुषको लागि ५ वटा गरि जम्मा १० वटा कलात्मक धाराहरु जडान गरि तिनै धाराहरुवाट पानि प्रभावित हुने गर्दछ ।
वि.स. २०२९ सालदेखि बुलबुले तालको निर्माण गरी संरक्षण गरीएपश्चात यसको आकर्षण बढ्दै गएको छ । बुलबुले तालको चारैतिर २२ विगाह जमिन अधिग्रहण गरी तारवार र ट्याङ्की निर्माण गरीएका छन् । तालको उत्तर र पूर्वपट्टि वृक्षारोपण गरीएको छ रत्न राजमार्गको तीनकुनेदेखि तालसम्म जाने बाटोको दुवैतिर विभिन्न जातका मौसमी फूलका बोटहरु र काागियो सल्लो रोपिएको छ । तालको दक्षिणपट्टि विभिन्न जातका फुलहरु रोपेर सुन्दर बगंैचा निर्माण गरीएको छ । यस बगैंचालाई बुलबुले उद्यान्न भन्ने गरीन्छ । उद्यान्नमा रोपीने फूलहरु उत्पादन गर्ने नर्सरी पनि तालको उत्तरतर्फ सडकको बायाँ भागमा रहेको छ ।
यहाँ विहान, दिउँसो र सााझ तिनै प्रहरमा स्नान गर्ने, घुमफिर गरी मनोरञ्जन गर्नेहरुको भीड लाग्दछ । बुलबुले उद्यान्नमा विभिन्न वनभोज खाने स्पोर्टहरु पनि बनाएका छन् । शनिवार तथा अन्य विदाका दिनहरुमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक विद्यार्थी र अन्य व्यक्तिहरुले वनभोज खाई नाचगान गरेर रमाइलो पनि गर्ने गर्दछन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालीकामा खानेपानीको संकट भएको अवस्थामा यहीबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरिन्छ । तालमा विभिन्न जातका माछाहरु पनि पालिएका छन् । यहाँ बाट बगेर खेरजाने पानी तलतिर ठुलो जलासयमा जम्मा हुन पुग्छ । यो जलाशयमा पानी बन्द गर्ने र खोल्ने गेट पनि राखिएको छ । कृषकहरुले धानको वीउ राख्ने बेलाहोस् अथवा रोपाईको बेलामा सुख्खा पर्न गयो भने यसै जलासयबाट पानी खोलेर खेतमा पानी पुर्‍याई आ–आफ्नो खाँचो टार्छन् । यति मात्र नभएर यस जलाशयमा सानातिना केटाकेटीहरु पौडी खेल्ने र माछा मार्नेसमेत गर्दछन् । बुलबुलेको तालबाहेक यसको हाताभित्र विभिन्न पानीका मुलहरु पनि छन् । यी मुलहरुलाई संकलन गरेर जलाशयको पूर्वतर्फबाट लाटिकोइली गााउँ विकास समितिका बासिन्दाहरुलाई विजुलीबाट पानी खिचेर काँक्रेविहारको डाँडामा पानी ट्याङ्की निर्माण गरी खानेपानीको सुविधा प्रदान पनि गरीएको छ पानी लिՙफ्ट गर्ने योजना ज्यादै खर्चालु भएपनि स्थानिय जनता र पुरातात्विक क्षेत्र काक्रेविहारमा वनभोज खान जानेहरुका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण बनेको छ ।
बुलबुले खानेपानी योजनाबाट विभिन्न ८१ वटा सार्वजनिक धाराहरु वितरण गरिएका भएपनि पछिल्लो समयमा पानि सुक्दै गएपछि ती धाराहरु हाल बन्द रहेका छन् ।
स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाइ र पर्यटकीय दृष्टिले समेत ज्यादै महत्व राख्ने बुलबुले तालको यथोचित रेखदेखमा विगतमा भन्दा केही शिथिलता आएको देखिन्छ । अहिले पनि यसको रेखदेख सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले गरीरहेको छ । सुर्खेत जिल्लाको गौरव, इज्जत र प्रतिष्ठासाग नाम गास्न पुगेको प्राकृतिक धरोहर यस बुलबुले तालको विषयमा हरेकले संवेदनशिल भई संरक्षण र सम्वद्र्धन गदै गएमा यसले सुर्खेत जिल्लालाई आफै सम्मानित नगर्ला भन्न सकिन्न ।
Author मेरो बकपत्रImagePosted on December 2, 2013 Leaveacomment
मेरो घर को स परिवार…
Author मेरो बकपत्रImagePosted on November 30, 2013 Leaveacomment
आफ्नो निन्द्रा बेची सन्तानको सपना किन्ने ‘आमा’ April 29, 2014
कर्नालीको सपना तुहिएको कथा (पुस्तक समिक्षा) April 28, 2014
संविधान बनाउन कि मन्त्री हुन निर्वाचन ? February 15, 2014
बच्चा को रमाइलो पढाई February 11, 2014
पशुपतिनाथ सम्झदा जोगमेहर आँखामा : सम्झना नारायण गोपाल को December 4, 2013
सुर्खेतको बुलबुले ताल December 2, 2013
परिवार November 30, 2013